‘सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको यसपछिको योजना भनेकै देशभर मिनि आउटलेटहरु खोल्ने हो’| Corporate Nepal
असार ३, २०७९ शुक्रबार ०९:०६
नेपालमा विभिन्न लोकप्रिय ब्राण्डका इलेक्ट्रिोनिक्स सामान बिक्री गर्ने सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो बिक्री सञ्जाललाई अझै बढाउँदै सबै मुख्य शहरहुँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ । चौधरी समूहअन्तर्गतको यो विभागले आफैले काठमाडौंसहितका स्थानमा २१ वटा सुविधासम्पन्न शोरुम खोलिसकेको छ भने त्योबाहेक सिजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गतका ब्राण्डहरुको बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताहरु देशभर सयौं छन् । सिजीको बिक्री योजनाबारे सिजी इलेक्ट्रोनिक्सका वरिष्ठ व्यवस्थापक वसन्त पालसँग गरिएको छोटो कुराकानीः
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अहिले शोरुम विस्तार गर्ने क्रममा छ । कति पुग्यो अहिले शोरुमको संख्या ?
शोरुमको संख्याको कुरा गर्दा २१ वटा पुग्यो अहिलेसम्म । शोरुममा पनि रिटेलको कुरा गर्दा हाम्रो दुई वटा फर्मेट छ । एउटा हाम्रो एलजी शपी पनि हो । त्यो चाहीं एक्सक्लुसिभ एलजी प्रोडक्टका लागि हो । दोस्रो फर्मेट भनेको हाम्रो सिजी डिजिटल हो । यो भनेको मल्टिब्राण्ड शोरुम हो । त्यहाँ एलजी हुन्छ । सिजी हुन्छ । टिसिएल हुन्छ । त्यहाँ केन्ट राख्छौं । एलिका राख्छौं । भनेको १२ वटा भन्दा धेरै ब्राण्ड सिजी डिजिटलमा हुन्छ ।
तपाईंहरुले आफ्नो शोरुमभन्दा बाहेक पनि रिटेल बिक्री गर्दै आउनु भएको छ ? त्यसको नेटवर्क कस्तो छ ?
अरु नेटवर्क पनि राम्रो छ । अरु भनेको हाम्रो डिलर नेटवर्क हो । हाम्रो प्रिफर ट्रेड पार्टनरहरु हुन्छ । अनलाइन पनि छ । अनलाइनको माध्यमबाट पनि हामीले बिक्री गरिरहेका छौं । रिटेल नेटवर्क भनेको ग्राहकको चाहना र मागअनुसार हुने कुरा हो । किनभने ग्राहक त जहाँसुकै हुनसक्छन् । हाम्रो हाइभ्यालु प्रोडक्टहरुको एक्सपेरियन्स उहाँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ ? त्यहाँ हाम्रो नेटवर्क हुन्छ । हाम्रो दक्ष म्यानपावर छ हामीसँग, उनीहरुले ग्राहकहरुलाई राम्ररी ट्रन गर्छ । ब्रिफ गर्छ । राम्ररी भिजोलाइज गर्छ । त्यसको लागि पनि हामीले रिटेल नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हो । रिटेलमा अफर र प्रोमोशनको कुरा आउँछ, जुन हामीले समय समयमा दिइरहेका हुन्छौं । रिटेल भनेको कम्पनीमार्फत सञ्चालित व्यवसाय भएकाले हामीहरुले कम्पनीकै नम्समा रन गछौं । हामीले इभेन्टहरु पनि गरिरहेका हुन्छौं, भीआईपी इभेन्टहरु । लोयल्टी प्रोग्राम पनि भइरहेको हुन्छ ।
तपाईंहरुकोमा किस्तावन्दी फाइनान्सको सुविधा पनि छ होइन ?
हो । ईएमआई सुविधाका लागि हाम्रो १० वटाभन्दा बढी बैंकसँग सहकार्य छ । ग्राहकले ती बैंकसँग एशोसियट भएर हाम्रो शोरुममा आउँदा शुन्य प्रतिशतमा ईएमआई पाउनुहुन्छ, त्यो पनि छ महिनादेखि १८ महिनाको किस्तावन्दीमा । त्यो त ठूलो फाइदा हो ग्राहकको लागि । अझ अहिलेको समयमा झन ठूलो बेनेफिट हो ।
तपाईंहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि शोरुमहरु विस्तार गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । कस्तो छ यो योजना ?
शोरुमहरु विस्तार गछौं हामी । अहिले हाम्रो धेरै शोरुम काठमाडौं उपत्यकामा छ । त्यसपछि इटहरी, विराटनगर, हेटौंडा, भरतपुरमा हाम्रो उपस्थिति छ । हाम्रो व्यवस्थापनको योजना के छ भने सक्दो छिटो हरेक प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्यो । हाम्रो एलजी शपी, सिजी डिजिटल हुनुपर्यो ।
तपाईंहरुले खोलेका शोरुममा ग्राहकलाई छुट सुविधा चाहीं के के हुन्छ ?
नयाँ शोरुम खोल्दा अतिरिक्त छुट दिन्छौं । अरु छुट भइहाल्छ । हामी गिफ्टहरु दिन्छौं ग्राहकहरुलाई । शुन्य प्रतिशत ईएमआई, निःशुल्क डेलिभरी, निःशुल्क इन्टलेशनको कुरा छ ।
शोरुमहरुमा काम गर्ने जनशक्ति कति पुग्यो अहिले ?
सबै शोरुममा गरेर १५० जनाभन्दा धेरै म्यानपावर छ । फुल्ली ट्रन स्टाफहरु हो उनीहरु । हामीले उनीहरुलाई सिधै शोरुममा राख्दैनौं । उनीहरुलाई पहिला प्रोपर ट्रेनिङ हुन्छ । प्रोडक्ट ट्रनिङदेखि लिएर कस्टोमर केयरसम्मको कुरा हुन्छ । कस्टोमरलाई कसरी सेवा दिने, कसरी प्रोडक्टका बारेमा बताउने ? कुरामा मात्रै सीमित हुन्न, ग्राहकले कुनै सामान किनेपछिको सेवा महत्वपूर्ण हुन्छ अहिले । एक पटक हाम्रो सर्भिस सेन्टरको मानिस गएर सामान इन्टलेशन गरेपछि पनि ग्राहकलाई चलाउन आएन वा कुनै सामान किनेर लगेपछि चलाउने आइडिया भएन भने हाम्रो कर्मचारीलाई उनीहरुको घरमै पठाएर कसरी चलाउने ? सबै सिकाएर आउँछौं । अर्को पटक पनि त्यही भयो भने गएर सर्भिस दिन्छौं । हाम्रो बिक्रीपछिको सेवा यति इन्लाइन हुन्छ, आजको दिनमा हाम्रो अधिकांश रिपिटेड कस्टोमर हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै आफ्नो छिमेकी, साथीभाई रिफर गरेर अरु कस्टोमर आउनुहुन्छ । यो भएको कारण हाम्रो ट्रेन म्यानपावर र बिक्रीपछिको सेवा कै कारण हो ।
अहिले तपाईंहरुले बिक्री गर्ने सामानमा नयाँ आएका प्रोडक्ट पनि होला । नयाँ आउनेवाला पनि होला ? के के छन् त्यस्ता प्रोडक्ट ?
नयाँ प्रोडक्टको कुरा गर्दा एलजी ओलिडकै कुरा गरौं । यो सबे शोरुममा उपलब्ध छ । एलजीको इन्स्टाभ्यू रेफ्रिजिरेटर प्रिमियम प्रोडक्ट हो । विश्व बजारमा उपलब्ध सबै प्रोडक्ट हाम्रो शोरुममा होस भनेर हामी प्रयास गछौं । एयर प्युरिफायर छ विभिन्न ब्राण्डमा । हाम्रो इन्हाउस सिजी ब्राण्डमा म्यारिडिया भन्ने प्रिमियम ब्राण्ड यसअघि नै लन्च गरिसकेको हो । यसअन्तर्गत ७५ इन्चसम्मको टिभीहरु छ । वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर आदि शोरुममा राखेका छौं । एलिकाको कुरा गर्दा चिम्नी हब, कुकिङ रेन्जहरु छन् । हाम्रो फोकस भनेको नयाँ र प्रिमियम प्रोडक्ट हो । प्रिमियम प्रोडक्ट राख्दा एउटा निश्चित क्याटागोरीका ग्राहकहरुले त्यही नै खोज्छन् । अहिले मानिसको जीवनशैली परिवर्तन भइरहेको छ । त्यही कारण बजार पनि परिवर्तन भएको छ । उनीहरुको जीवनशैलीमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभाव पारेको छ जसका कारण उनीहरु हाइटेक, एडभान्स प्रोडक्टहरु लिउँ भन्नेमा देखिन्छन् । अहिले धेरै प्रोडक्ट मोवाइलबाट सञ्चालन गर्न सकिने पनि छन् । अधिकांश ब्राण्डमा यो सुविधा छ । ग्राहकको दैनिक जीवनलाई कसरी सहज गर्ने ? भन्ने कुराबाट हाम्रा सबै ब्राण्डका प्रोडक्टहरु परिस्कृत हुँदै आएका छन् । ग्राहकले कार्यालयमा बसेर घरको एयर कन्डिस्नर सञ्चालन गर्नसक्छ । घर पुग्दा आफूलाई चाहिएको तापक्रम बनाइराख्न सकिन्छ । वासिङ मेशिन घरबाट अन गरेर गएर अफिसमा पुगेर अफ गर्न सकिन्छ । रेफ्रिजिरेटर पनि त्यही हो । डिसवाटर नेपाली बजारमा नयाँ हो । हामीले यो प्रोडक्ट ल्याएको तीन बर्ष भइसक्यो । विस्तारै ग्राहकहरुलाई यसबारेमा थाहा हुँदै गएको छ ।
बजारमा त अहिले निकै प्रतिस्पर्धा छ । नयाँ नयाँ सामान पनि आएका छन् । तपाईंहरुलाई कत्तिको चुनौति छ ?
मार्केट कम्पिटिशनको कुरा गर्दा च्यालेन्स चाहीं छ । त्यसैका कारण हाम्रो तर्फबाट दुई वटा कुरामा जोड छ । एउटा हो प्रिमियम प्रोडक्टमा फोकस । त्यो च्यानलमा सबैले गर्दैन् । प्रिमियम प्रोडक्टमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन् । त्यसपछि स्ट्रिमलाईन प्रोडक्टको कुरा गरौं जुन नियमित तरिकाले जान्छ । त्यसमा हाम्रो मूल्यभन्दा पनि गुणस्तर हो । सिजी ब्राण्ड जुन हाम्रो घरभित्रको प्रोडक्ट हो, यसको मोटो नै छ ‘वेष्ट प्रोडक्ट अन एफोडेवल प्राइस ।’ हरेक घरपरिवारमा सिजीका प्रोडक्ट पुगोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । किनभने सबैले महंगो सामान किन्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण हामीले मार्केट बुझेर र अध्ययन गरेर स्टार्टिङ प्राइसरेन्जदेखि मिडरेन्ज र हाइयररेन्जका प्रोडक्ट र ब्राण्ड हामीले राखेका छौं । नयाँ नयाँ ब्राण्ड पनि थप गरिरहेका छौं । त्यसकारण प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पायनियर हौं भनौं न हामी यसमा । किनभने हामीले हरेक क्याटागोरीका प्रोडक्ट दिएका छौं । एउटा मात्रै छैन् हामीसँग ।
दुई बर्ष कोभिडको प्रभावपछि अहिले बजार सहज हुँदै गएको छ । तपाईंहरुको बिक्री कस्तो छ अहिले ?
कोभिडपछिको बिक्री दर निकै नै राम्रो हो । धेरै राम्रो पिकअप भएको हो । तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचनको कारण प्रभाव परेको छ । हाम्रो विजनेश धेरै डाउन भएको त होइन् । तर केही असर भने परेको छ । तर यो चाँडै करेक्शन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । चाँडै कभर गछौं ।
केही छ थप भन्नुपर्ने वा भावी योजनाबारे ?
हाम्रो योजना भन्दा शोरुम विस्तार नै हो जुन सुरुमा पनि भनें । कस्टोमर एक्सपेरियन्सका लागि हामी के भन्छौं भने जति पनि नेपाली उपभोक्तालाई हाम्रो शोरुमहरु भ्रमण गर्नुस् । उहाँहरु आएपछि थाहा हुन्छ कस्तो कस्तो प्रोडक्ट नेपाली बजारमा छ । कसरी हाम्रो दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरुले तपाईंहरुसँग डिल गर्छ ? कस्टोमर सर्भिर र आफ्टर सेल्स सर्भिस हाम्रो शोरुमबाट कसरी प्रदान गछौं ? भन्ने कुरा हेर्नुहोस् । हामी त्यसमा पूर्णरुपमा केन्द्रीत छौं । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्स र फोकस नै नेपालभरी हाम्रो शोरुमहरु कसरी पुर्याउने ? भन्ने हो । एक–दुई प्रदेशमा मात्रै होइन्, हरेक ठाउँमा पुर्याउने योजना हो ।
तपाईंहरुको शोरुम शहरकेन्द्रीत देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने योजना छैन् ?
त्यही नै हो हाम्रो योजना । सेकेण्ड एक्सटेन्शन प्लान भनेकै ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी पुग्ने ? भन्ने हो । अहिले शहरी क्षेत्रमा कभर गरिरहेका छौं । अब हामी प्रमुख शहरलाई केन्द्रीत गर्दै शोरुमहरु विस्तार गछौं । त्यसपछिको योजना भनेको मिनि आउटलेट हो । त्यस्तो शोरुमहरु धेरै ठूलो हुँदैन् । ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरेर ती शोरुम खुल्छन् । अहिले शहरी क्षेत्रमा खोल्ने शोरुमको सरदर क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गफिट हो । यसपछिको विस्तार भनेको साना शहरहरुमा दुई हजार वर्गफिटको शोरुम हुन्छ । मुख्य मुख्य प्रोडक्टहरु त्यहाँ हुन्छ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहक पनि सजिलै आएर आफूलाई चाहिएको प्रोडक्ट किन्न सकुन् ।